Isilingo Samahhala seNetflix (2020) - Jabulela ukusakazwa kwezinsuku ezingama-30 - Ezokuzijabulisa
INetflix ingenye yezinsizakalo zokusakaza ezithandwa kakhulu emhlabeni njengamanje. Ingxenye emangalisa kakhulu ngakho ukuthi banikela ngesivivinyo samahhala senyanga eyodwa. Ngakho-ke ungonga imali futhi uyithole ngokushesha ngaphandle kokucabanga.Ukuthembeka kakhulu, kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele empeleni ubhalisele inyanga yamahhala yeNetflix uma ungakakwenzi!
Futhi, kulula kakhulu ukuqala. Awudingi ukuchitha amahora usesha izaphulelo noma amakhodi amakhuphoni.Ngokuya ngemiphumela, i-Netflix njengamanje inama-movie angaphezu kuka-6000 + asakazekayo nemibukiso engama-500 okufanele ibukwe.
Banokuqukethwe okumangazayo abangakusakaza futhi bakubuke ngokushesha. Ake sixoxe ngokuthi ungasithola kanjani isilingo samahhala seNetflix futhi ufunde kabanzi mayelana nokuthi iyiphi insizakalo yeNetflix nokuthi ungayimangalela kanjani leyo nyanga yokuqala mahhala. Ake sikukhombise ukuthi kanjani.
Khomba ukukhumbula - ayikho ikhodi yephromo edingekayo.
Imininingwane emfushane ngeNetflix:
Yebo, uma ungenalo ulwazi oluningi ngeNetflix, ake sikutshele, iNetflix empeleni ingumhlinzeki omkhulu kakhulu womhlaba wonke wochungechunge lokusakaza oku-inthanethi nama-movie. Lo mnikezeli wesevisi empeleni wasungulwa emuva ngo-1997 eScotts Valley, eCalifornia.Indlunkulu yabo manje isuselwe eLos Gatos, CA.
Kusukela ngo-Ephreli 2020, iNetflix ibike ukuthi inabangaphezu kwababhalisi abayizigidi eziyi-170 emhlabeni jikelele (60 Million e-U.S kuphela).Bebeqale ngokunikela ngama-DVD ezinga eliphansi ngesevisi yeposi lapho ukhokha khona imali ebekiwe futhi amakhasimende angakhetha ezihlokweni eziyi-100 kuwo wonke ama-DVD nama-Blu-ray disc.
Ngokuqashwa okungenamkhawulo futhi kungekho mali ekhishwe sekwedlule isikhathi, empeleni ubungeke uhambe kabi. INetflix empeleni manje seyaziwa njengomholi womkhiqizo ekusakazweni kwemidiya oku-inthanethi, ngokuqukethwe, ababhalisile, kanye nemali engenayo eyenziwe. Inabasebenzisi abaningi namuhla.
Kuchazwe Isivivinyo seNetflix:
Uyazi ukuthi imvamisa kufanele usebenzise imali engaphezulu kwama- $ 100 ngenyanga ngenxa yekhebula futhi futhi ubuke ama-movie, engizwa ukuthi kuningi kakhulu.Umhlinzeki wesevisi yekhebula futhi akakaze akunikeze inkinga yamahhala noma yamahhala yokuhlolwa kwezinsizakalo zabo noma kungenxa yokuthi kubiza imali ukuthumela umfana onguchwepheshe ukuthi axhume ibhokisi lakho lekhebula endaweni yakho.
Ngokubhaliselwe kwe-Netflix, konke kungenziwa ku-inthanethi. Odinga ukukwenza nje, vele ubhalise futhi ubhalisele inyanga yakho yamahhala okunikeza ukufinyelela ngokushesha kumtapo wabo wezincwadi. Uma ungafisi ukuqhubeka, likhansele ngaphambi kokuphela kwenyanga yokuqala!
Njengoba wazi, iNetflix iyinsizakalo yokusakaza eku-inthanethi enikezela ngokuqukethwe okuningi kwemidiya ngokushintshisana ngemali encane yenyanga evela kubasebenzisi bayo. Njengomuntu obhalisile, nakanjani ungasebenzisa iqoqo elikhulu lama-movie le-Netflix, uchungechunge lwethelevishini, ukukhiqizwa kwangempela, kanye namadokhumentari ongakubuka noma yikuphi, kungaba yikhompyutha yakho, i-smartphone, noma ithebhulethi. Kodwa-ke, uma udidekile uma ufuna ukubhalisela le nsizakalo yokubhalisa yanyanga zonke, ungavele uzame kuqala ngesikhathi samahhala senyanga eyodwa.
INetflix ihlinzeka ngesivivinyo samahhala inyanga eyodwa. Kunemibandela efana nokuthi kufanele ube neKhadi Lesikweletu. Uma ungenaso isikweletu ungasebenzisa i-Netflix Gift Card.
Isinyathelo sokuqala okudingeka ukwenze ukukhetha uhlelo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuya kusayithi le-Netflix ( https://www.netflix.com/ ) bese uchofoza inkinobho Joyina Ngenyanga lapho.
Ngemuva kwalokho, chofoza ku-View Plans, bese ukhetha kokukhethwa kukho okubhaliselwe okuthathu okunikezwa laphaya (Okuyisisekelo, Okujwayelekile, nePrimiyamu). Lapho usukhethile, chofoza ku-Qhubeka.
Ngemuva kwalokho, isinyathelo esilandelayo ukudala i-akhawunti yakho. Ukuze wenze lokhu, konke okuzodinga ukufaka ikheli le-imeyili nephasiwedi evumelekile. Gcwalisa izinkambu, bese uchofoza ku-Qhubeka.
Ngemuva kwalokho isinyathelo sokugcina ukukhetha indlela yokukhokha. Ungakhetha indlela yokukhokha phakathi kokukhokha ngekhadi lesikweletu noma nge-PayPal. Ngemuva kwalokho, udinga ukufaka imininingwane yakho yokukhokha, bese uqhafaza ku-Start ukuze uqale ubulungu bakho. Ngemuva kwalokho uzonikezwa ukufinyelela kwenyanga eyodwa kulabhulali ephelele yezindaba yeNetflix.
Ungakhansela nokubhalisa kwakho nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sesilingo kuze kufike osukwini olulodwa ngaphambi kosuku lokuphelelwa yisikhathi. Uzothola isikhumbuzi se-imeyili esizothunyelwa kuwe njengokuqapha okwengeziwe.
Ukuze uzikhiphe ohlwini lobulungu beNetflix futhi ungakhokhiswa lutho, hlala ukhumbula ukukhansela okubhalisile ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kosuku lokukhokha olulandelayo.
Futhi, khumbula ukuthi iNetflix njengamanje imise ukunikela ngenyanga yesivivinyo samahhala kwamanye amazwe, kepha inikela ngamaphromoshini akhethekile lapho unethuba lokufinyelela kulokhu kukhushulwa izinsuku ezimbalwa. Siphakamisa ukuthi ulandele iNetflix kumanethiwekhi abo omphakathi ukuze wazi ukunikezwa kwabasebenzisi abasha.
Ibiza malini iNetflix Ngemuva kwesivivinyo samahhala?
Iningi lamanethiwekhi wethelevishini wekhebula nesathelayithi anikela ngezinhlelo zama-movie azidlala kuphela kusihlwa nasebusuku, lapho iningi labantu abasebenzayo lilele.
Okubi kakhulu ukuthi bamane baphinde basebenzise amabhayisikobho afanayo ayi-10 noma ama-20 kaninginingi unyaka wonke.Lokhu kukushiya, wena khasimende, unokukhetha okuncane kakhulu ngezinhlobo zama-movie ongawabuka.
INetflix inamakhulu amafilimu akudala nawesimanje ngokufunwa, ongayibuka noma kunini lapho isimo sikushaya.Iqoqo lawo lonke litholakala ngaphandle kwemingcele, ngaphakathi kweNetflix mahhala inyanga eyodwa. Lokhu kuzokunikeza umqondo omuhle walokho abakunikezayo.
Izinkathi Zonke Zemibukiso Yethelevishini Edume Kakhulu ziyatholakala -
INetflix, awudingi ukulinda isikhathi eside ukuthola ukuthi kwenzekani ngokulandelayo emibukisweni yakho oyithandayo njengoba iNetflix inikela ngazo zonke izikhathi zonyaka zezinhlelo zethelevishini ezidlule nezamanje ezaziwa kakhulu.Uchungechunge lwasekuqaleni lweNetflix nalo lukhishwa ngaphandle kwesikhathi sokulinda phakathi kweziqephu okusobala ukuthi lukwenza kube izaba ezinhle zokuchitha uMgqibelo wonke noma iSonto lonke lihleli phambi kweshubhu!
Akukho ukuphazamiseka kwezentengiso -
Kulungile, ngakho-ke, zonke iziteshi zokusakaza zasendaweni nezenethiwekhi zenza imali yazo ngokuthengisa kakhulu izindawo zokukhangisa futhi zikuphoqa ukuthi ubuke izikhangiso ezingapheli zemikhiqizo ongafuni ukuyithenga ngempela.Njengoba wazi, Abathengisi badla imizuzu yakho engama-21 yesikhathi sakho ngehora ngalinye olichitha phambi kwebhokisi lekhebula. NgeNetflix, ubuka lokho ofuna ukukubuka lapho ufuna ukukubuka.
Lokhu kusho ukuthi ungabuka amanye ama-movie, imibukiso ye-TV, nama-documentary ngaphandle kokuchitha amahora angeziwe wesikhathi sakho esibalulekile phambi kwethelevishini!
INetflix inobungani bomzali impela -
Enye yezinto ezinhle kakhulu ngeNetflix ukuthi Ngaphakathi kwe-akhawunti yakho yeNetflix, uzokwazi ukufinyelela emazingeni ahlukene angama-4 ezilawuli zabazali: izingane ezincane, izingane ezindala, intsha kanye nabantu abadala.Izilawuli zabazali zikuvumela ukuthi usethe amaphrofayili ahlukile wamalungu omndeni ngamanye. Lapho bengena ngemvume ku-akhawunti yakho yeNetflix kudivayisi yabo, ngeke bakwazi ukufinyelela ezinhlelweni ezingalifanele ibanga leminyaka obanikeze lona.
Kusemthethweni ngokuphelele -
Akukaze kube lula ukuchofoza kumasayithi wesifufula futhi umane 'uphange' uhlelo ofuna ukulibuka. Uma wena noma umndeni wakho nibanjwa niphanga, ningahle nibhekane nenhlawulo enzima nesikhathi sejele.
Yize abaningi bethu becabanga ukuthi siphephile ekushushisweni, iqiniso ukuthi unesihe sezinhlangano nezinkampani ezingabanikazi bokuqukethwe, wena pirate. Bangakushushisa nganoma yisiphi isikhathi.
INetflix iyaphatheka -
Ungayibuka kalula emsebenzini noma efonini noma kuthebhulethi yakho. Yibuke emotweni ngenkathi usalinde noma yini.Ukuba yilungu leNetflix kusho ukuthi ungangena kwi-akhawunti yakho noma yikuphi, inqobo nje uma unedivayisi ehambisanayo noxhumano lwe-inthanethi.Ungathatha ngokoqobo iNetflix eholidini nawe noma kuphi emhlabeni.
Kulesi sihloko, sikuchazele konke mayelana neNetflix nokuthi ungasithola kanjani isilingo samahhala seNetflix. Ungathola kalula i- mahhala Netflix isilingo ngokuvakashela iwebhusayithi yabo futhi ubhalise. Futhi khumbula, uma ufuna kuphela isikhathi samahhala sezinsuku ezingama-30 noma awunelisekile ngensizakalo yabo njengoba ubulindele ukuthi ungakhansela okubhalisile nganoma isiphi isikhathi ngaphambi kwesikhathi senyanga engu-1 noma kungenjalo uzokhokhiswa.
Izilingo ezengeziwe ongazithanda:
Isivivinyo Samahhala Samavidiyo
bukela isiqephu esisodwa ku-inthanethi mahhala
amavidiyo wamahhala ku-amazon prime
sakaza ividiyo kusuka kwi-laptop uye ku-chromecast
izingosi zamahhala zokusakazwa kwe-movie online
Ukusakazwa kwama-movie okugcwele kwamahhala ku-inthanethi
izingosi zama-movie zamahhala ezinjenge-crackle